သဘာဝတွင်ဓာတ်ပုံပုံပြင်များ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Evgeni Dinev အားဖြင့်ဓာတ်ပုံများသဘာဝတရား၏ Bates အသက်ရှုပုံဖော်။ သူကသာမန်မျက်စိအဘို့ဝှက်ထားရှုခင်းများ၏ search အတွက်လမ်းပေါ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျခမျြးအေးနှင့်အတူ pinched ပေမယ့်သဘောသဘာဝနိုးသောအခါအအတိအကျခဏစောင့်ကြည့်နေတဲ့အထွတ်အထိပ်အပေါ်ရှည်လျားနေထွက်ရှေ့တော်၌တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။
အိုင်ဗင် Belchev အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag များအတွက်:
ဓါတ်ပုံပညာကိုသင်ကလေးတစ်ဦးခဲ့ကြသည်ကတည်းကသင်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်ဆဲသောအခြိနျကာလကို National Geographic ၏ကိစ္စရပ်များကို၏အမှတ်တရများအားဖြင့် လိုက်. နေကြသနည်း
ဤသည်ငါ့ကိုပစ်ခတ်မှုစတင်တစ်ဦးက start ပေးသောရုံမီးပွားခဲ့သည်။
သင်မှာ .... ရှိသည် သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေရောင်းအတွက်အောင်မြင်မှု။ သင်သည်အဘယ်သို့ဤအဆင့်မှမရမှတဆင့်သွားပြီပြီလော
ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောရိုက်ချက်၏ search အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအချက်ကြောင့်ငါ့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေတစ်နေရာရာမှာနေဖို့မပါဘူး, ငါသည်အစဉ်မပြတ်ပြုလုပ်လိုက်ရန်လိုအပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဒီတစ်ခါလည်းငါအပြည့်အဝအကြံပေးအဖွဲ့သာလိုအပ်ပါတယ်သောဤလူမျိုး, တက်မပေးရလောက်အောင်ခေါင်းမာတယ်, ဒါပေမယ့်အခမဲ့အချိန်အများကြီး, ကသာနင်္ဂနွေကျင့်သုံးမရပါ။
ဒါဟာခက်ခဲသည့်အနက်ရှိုင်းဆုံးအိပ်ပျော်ခြင်းအလယ်၌, ညအချိန်တွင်တက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာကိုမှထိတ်လန်ကြောင်းကဒီပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ခြင်း, ငါတဦးတည်းမတိုင်မီအချိန်အတွက်ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့, မြူ, မိုး, ဆီးနှင်း, Blizzard အတွက်စဉ်းစားနိုငျသောလမ်းများမဆိုကြင်နာတလျှောက်, နာရီမောင်းနှင်သို့မဟုတ်ပိတ်ဆီးနေသောမှောင်မိုက်၌သှားပွီ မိုဃ်းလင်း။
ငါမိုးကြိုးမုန်တိုင်းတစ်ခုရုတ်တရက်နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပွားအတူတောင်ပေါ်မှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေများမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိတွေ့ပါပြီ။ လက်လှမ်းမမှီသောအရပ်တို့ကိုမရှာ, ငါမကြာခဏငါကြီးမြတ်အလိုတော်အားဖြင့်ကျော်လွှားရန်စီမံခန့်ခွဲပြီကျော်လွှားအတားအဆီးရောက်ရှိပါပြီ။ ပြန်ကြည့်, ငါတစ်စုံတစ်ဦးကများကအတင်းအကျပ်ခံခြင်းမရှိဘဲဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတဆင့်ကျော်သွားကြပြီဘယ်လိုတွေးမိ။
ဒါဟာလေပြေမှုတ်ခဲ့သည်, နေထွန်းလင်းခံခဲ့ရပါတယ်တစ်အံ့သြဖွယ်ဆောင်းဦးရာသီတစ်ရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ 2170 မီတာမြင့်တက်ထိပ်ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်ကို၎င်း, လေပြေကလက်ခံနိုင်ဖွယ်ကြီးနှင့်ပြီးသားဒီအမြင့်မှာအတော်လေးအံ့သြစရာမဟုတ်ခဲ့သည့်ဟာရီကိန်းကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်ထက်ပိုမှုတ်စတင်ခဲ့သည်။
ဒီလိုအနိမ့်သောအပူချိန်နဲ့ကျွန်မသာပါးလွှာလေတိုက်ဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ထားခဲ့သည်ဘို့ပြင်ဆင်မခံခဲ့ရပါဘူး။ အားကောင်းခိုင်ခံ့သောလေတိုက်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးတင်ဆောင်ခဲ့သမျှကိုတစ်ဝှမ်းဖြူ, မြောက်မျက်နှာမှတွန်းအားပေး။ ကံကောင်းတာကကထိပ်ပေါ်မှာတစ်အမိုးအကာရှိကွောငျးကိုထွက်လှည့်။
အဆိုပါရူပါရုံကဲ့သို့မကြာမီငါသာအစားပြတင်းပေါက်တစ်ပေါက်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမတံခါးကိုအတူစာရွက်သတ္တု, တစ်စာရွက်သတ္တုကြမ်းပြင်အစားသစ်သားပျဉ်-အိပ်ရာ၏ လုပ်. , စစ်တပ်တဲကိုပုံနဲ့တူတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုချဉ်းကပ်အဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာဘာမျှမထက်ပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်, အနည်းဆုံးငါအမိုးအကာအောက်မှာခဲ့ပေမယ့်ငါရေခဲသေတ္တာထဲမှာရပ်နေခဲ့လျှင်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာနှစ်နာရီနေဝင်ချိန်သည်အထိခဲ့ကြသည်ငါလေသည်မြူကွာမှုတ်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိမျှစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကဒီထူးထူးဆန်းဆန်းရေခဲသေတ္တာကဲ့သို့အမိုးအကာသွားရောက်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုလမ်းတစ်လျှောက်မသွားဘဲဖူးဒါကြောင့်ကျနော်အထဲတွင်စောင့်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အချိန်တဖြည်းဖြည်းဖြတ်သန်းခဲ့လေကိုအပြင်ဘက်ဟောက်ခံခဲ့ရနှင့်ငါ့အံသွားထိန်းအကွပ်မရှိ chattering စတင်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနွေးဖို့, အခြိနျမှနျမှငါမသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုဆောင်ခဲ့သော, ခုန်ထွက်သွားလေ၏။ ထို့ကြောင့်နေချိန်မှာငါကတက်အလှဆင်ရန်စတင်ဖွင့်နေဝင်ချိန်မီ, အအေးနှင့်အခုန်တွေနဲ့တုန်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါမြင်ကွင်းတိုးတက်, မုန်တိုင်းနောက်တဖန်ဒါပြင်းထန်သောမဟုတ်ခဲ့အပေါင်းတို့နှင့်နှစ်ဖက်ပေါ်တွင်သဘာဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များနှင့်အတူ vivified ခဲ့သည်။ ထိပ်အတော်လေးကြီးမား, အကြမ်းဖျဉ်းဖြစ်သကဲ့သို့ငါရှိရာပထမဦးဆုံးသွားကြဖို့အံ့သြခဲ့ပါတယ်ငါရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းအခြမ်းမှဖွင့်လို့မရဘူး, လမ်းလျှောက်အများကြီးလိုအပ်ခဲ့သည်။
ကံကောင်းတာကငါပဲထို့နောက်ကတ္တီပါနီအစက်အပြောက်ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထွက်ကိုမီးရှို့သဖြင့်, နေရောင်၏နောက်ဆုံးရောင်ခြည်ဖြင့် illuminated ခဲ့သောတောင်ပေါ်မှာ Kupena မှတစ်ဦးအမြင်နှင့်တကွ, အရှေ့၌ထကိမ်မင်းထံသို့ပို့ဆောင်။
ပန်းချီဆရာကသူ့စုတ်တံနှင့်အတူကိုခံခဲ့ရလျှင်အဖြစ်လေတိုက်ကြောင့်နောက်ကွယ်မှမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးအဝေးမှုတ်ခဲ့သည်။ ဤသူသည်ငါခိုင်မာဆိုလိုရာဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်အန္တရာယ်ကိုယူပြီးနှင့်ဤအံ့သြဖွယ်ယခုအချိန်တွင်ပျောက်ဆုံးမဟုတ်, နောက်ကျောပြီနိုင်ဘူး။
အကြှနျုပျ၏ဓါတ်ပုံတွေကိုကမ္ဘာ၏ကြောင်းဆင်းလှသောအစ်မ, idyllic တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပုံဖော်။ ရုပ်ဆိုး, မောပန်းခြင်း, ညှဉ်းဆဲတတ်သော - သူတို့ကို၌သင်တို့သည်၎င်း၏ antithesis မမြင်ရနိုင်ပါ။
အဘယျသို့အစမမြင်ရတဲ့ဖြစ်နေဆဲဓာတ်ပုံများတစ်ဦးအချက်ကိုလုပ်ငါ့ကိုအသုံးပြုတဲ့အားထုတ်မှုဖြစ်ကြသည်။ ပေါ့ပေါ့အဖြစ်ကြည့်ရှုသူခဲသူကိုတောင်းဆိုနေတာနှင့်မည်သို့ရှိသည် frame ၏အဆုံး၏ညာဘက်နှစ်မီတာဘာကြောင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး image ကိုကိုယ်နှိုက်ကရိပ် မိ. ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးစွာသောသည်းခံခြင်းနဲ့ Hard အလုပ်လိုအပ်သည်သက်သေပြနိုင်ဖို့အတွက်တဦးတည်းဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတဦးတည်းအတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သငျသညျအစားထိုးများမှာလျှင်, ပြိုင်ဆိုင်မှုကြီးသောကြောင့်ဒါဟာလူတွေတန်ဖိုးထားခံရဖို့ရာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်, တည်ဆောက်ရန်ထိပ်တန်းအရေးပါမှုသည်။
Evgeni Dinev အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
Evgeni Dinev အားဖြင့်ကပိုသဘာဝဓာတ်ပုံများ
Facebook ပေါ်မှာ Evgeni Dinev
ပုံရိပ်တွေ, တောင်များ, ဓာတ်ပုံ | | rating:5/ 30